Fanisana 21 - Ny Baiboly
Fanisana toko 21
Ny nandresena ny mpanjakan'i Arada - Ny bibilava varahina - Ny nandehanan'Israely manodidina ny tanin'i Edoma - Ny nandresena ny mpanjakan'ny Amoreana sy Basana.
1Ren'ilay Kananeana, mpanjakan'i Arada, nonina tao Negeba, fa hoe tamy Israely, mihazo ny làlana mankany Atarina, ka rafitra niady taminy, sy nahazo sambo-belona tamin'Israely izy. 2Dia nivoady tamin'ny Tompo Israely, nanao hoe: Raha atolotrao eo an-tànako ity firenena ity, dia hovoadiko hatao anatema ny tanànany. 3Nohenoin'ny Tompo ny feon'Israely, ka natolony ny Kananeana, dia natao anatema izy ireo, mbamin'ny tanànany. Ary ny anaran'izany fitoerana izany, dia natao hoe Hormà.
4Niala tany an-tendrombohitra Hora izy ireo, dia nihazo ny làlan'ny ranomasina Mena, hanodidina ny tanin'i Edoma. Namoifo tsy niaritra ny vahoaka tamin'io làlana io, 5ka niteny nanome tsiny an'Andriamanitra sy Moizy hoe: Nahoana no dia nentinao niakatra avy tany Ejipta izahay ho faty aty an'efitra? Ny mofo tsy misy, ny rano tsy misy, ary ny fanahinay efa monainan'itony hanina tsinontsinona itony. 6Ary Iaveh tamin'izay nandefa bibilava mahamay hamely ny vahoaka: nokekerin'ireny ny vahoaka ary nahafatesana betsaka ny olona tamin'Israely. 7Nankeo amin'i Moizy ny vahoaka ka nanao hoe: Efa nanota izahay fa niteny nanome tsiny an'ny Tompo sy hianao. Mivavaha amin'ny Tompo mba hoesoriny lavitra anay ireo bibilava ireo. Dia nivavaka ho an'ny vahoaka Moizy, 8ka hoy Iaveh tamin'i Moizy: Manaova hianao bibilava mahamay ka apetraho amin'ny tsato-kazo, fa ho velona aina izay rehetra voakaikitra ka mijery izany. 9Dia nanao bibilava varahina Moizy, ka napetrany teo amin'ny tsato-kazo lava, dia nijery ny bibilava varahina izy dia velona.
10Niainga ny zanak'Israely, ka nitoby tao Obota; 11Niala tao Obota izy, dia nitoby tao Jeabarima ao amin'ny efitra mifanandrify amin'i Moaba, ao amin'ny fiposahan'ny masoandro. 12Niala tao izy, dia nitoby tao amin'ny lohasahan'i Zareda. 13Niala tao izy, dia nitoby tao an-dafin'i Arnòna, izay mivalana amin'ny efitra, rahefa mivoaka ny faritanin'ny Amoreana; fa Arnòna no faritr'i Moaba, eo anelanelan'i Moaba sy ny Amoreana. 14Ka izany no ilazana ao amin'ny bokin'ny Adin'ny Tompo hoe: Lasan'ny Tompo Vaheba mirimorimo fandeha, sy ny ranon-driakan'i Arnòna, 15ary ny kisolosolon'ny ranon-driaka izay mitsontsorika mankany amin'ny fitoerana Ara, sy mipaka amin'ny Amoreana.
16Avy ao, dia nankany Beera izy. Io ilay fantsakana nilazan'ny Tompo tamin'i Moizy hoe: Angony ny vahoaka ka homeko rano izy ireo. 17Tamin'izay no nihira izao tononkira izao Israely:
18Misondrota, ry fantsakana! Hobionareo izy. Fantsakana nolavahin'ny andriandahy, nabanabanan'ny lehiben'ny vahoaka, tamin'ny tehina fanapahana, dia ny tehin'izy ireo.
19Avy tany an'efitra izy ireo, dia nankany Matanà; avy any Matanà dia nankany Nahaliela; avy any Nahaliela, dia nankany Bamota; 20avy any Bamota, dia nankany amin'ny lohasaha izay ao amin'ny sahan'i Moaba, eo an-tampon'i Fasgà, izay manerinerina amin'ny efitra.
21Ary Israely nandefa iraka ho any amin'i Sehona, mpanjakan'ny Amoreana, hanao aminy hoe: 22Avelao aho mba handalo ny taninao: fa tsy hivily ho amin'ny saha izahay, na ho amin'ny tanim-boaloboka; ary tsy hisotro ny rano amin'ny fantsakana; fa hizotra amin'ny làlan'andriana izahay, mandra-pahafakay ny faritaninao. 23Tsy navelan'i Sehona handalo ny faritaniny Israely, fa nanangona ny vahoakany rehetra izy, ka nivoaka hitsena an'Israely, tany an'efitra; dia tonga tany Jasà ary rafitra ady tamin'Israely. 24Israely namely azy tamin'ny lelan-tsabatra, ka nahazo ny taniny hatrany Arnòna ka hatrany Jabaoka, hatreo amin'ny zanak'i Amona, fa mafy ny faritry ny tanin'ny zanak'i Amona. 25Nalain'Israely avokoa izany tanàna rehetra izany, ka nonenan'Israely ny tanànan'ny Amoreana rehetra, dia Hesebona sy ny zana-bohiny rehetra. 26Hesebona no tanànan'i Sehona, mpanjakan'ny Amoreana, izay efa nanafika ny mpanjakan'i Moaba taloha sy naka ny taniny rehetra hatrany Arnòna. 27Izany no nanaovan'ny mpanao tononkira hoe: Midira ao Hesebona hianareo.
Aoreno indray ka hamafiso ny tanànan'i Sehona.
28Fa nisy afo nivoaka avy tao Hesebona, Ary lelafo avy tao an-tanànan'i Sehona, Ka nandevona an'i Ara-Moaba, Dia ny tompon'ny havoan'i Arnòna.
29Loza ho anao, ry Moaba! Levona hianao, ry vahoakan'i Kamosy; Nafoiny ny zanany lahy nandositra, Ary ny zanany vavy lasan-ko babo Ho an'i Sehona, mpanjakan'ny Amoreana.
30Nolefasantsika zana-tsipìka izy ireo; Rava Hesebona hatrany Dibona, Ary nofoanantsika hatrany Nofe, Sy norehetantsika hatrany Medabà. 31Dia nitoetra teo amin'ny tanin'ny Amoreana Israely. 32Naniraka olona hisafo an'i Jazera Moizy; dia afak'izy ireo ny zana-bohiny, ka noroahiny ny Amoreana tamin'ireny.
33Izay izy, dia niova làlana ka niakatra ny làlana mankany Basàna; Nivoaka Oga, mpanjakan'i Basàna, mbamin'ny vahoakany rehetra nitsena azy ireo, mba hiady aminy ao Edraìa. 34Ary hoy Iaveh tamin'i Moizy: Aza matahotra azy, fa atolotro eo an-tànanao izy mbamin'ny vahoakany rehetra, ary ny taniny, ka ataovy toy ny nanaovanao an'i Sehona, mpanjakan'ny Amoreana izay nonina tao Hesebona. 35Dia nandresy azy mbamin'ny zanany lahy sy ny vahoakany rehetra izy ireo; tsy nasiany niangana na dia iray aza, ka azony ny taniny. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0124 seconds